फिरोज जाँहगीर घान्दी गुजराती पारसी थिए भने ईन्दिरा कश्मिरी ब्राह्मण परिवारकी थिईन् । उनको पुरा नाम ईन्दिरा ‘प्रियदर्शिनी’ नेहरु थियो । ‘प्रियदर्शिनी’ उपनाम उनलाई महान साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरले दिएका थिए । उत्तर प्रदेशको इलाहावाद, अयोध्या क्षेत्रमा जवाहरलाल नेहरु परिवारप्रति सर्वसाधारण निकै इज्जत गर्थे । तर इन्दिरा–फिरोज विवाहको विषयमा खुब कानेखुसी हुने गथ्र्याे, ‘कसरी एक उच्च ब्राह्मणकी छोरी बनियाँ (वैश्य) सँग विवाह गर्न सक्छे ? घान्दी बनियाँ नै त हो ।’ इन्दिराकै कारण फिरोज ‘घान्दी’बाट ‘गान्धी’ बनाईए । र, कांग्रेस नेटवर्कले यसलाई नेहरु–गान्धी परिवारबीच अटुट सम्बन्ध कायम भयो भन्दै खुब प्रचार गरे । यस प्रचारले आम मानिसहरुमा फिरोज गान्धी र महात्मा गान्धीबीच पारिवारिक नाता छ भन्ने भ्रम फैलियो । जसले गर्दा, इन्दिरा र फिरोज नेहरु–गान्धी परिवारको अकाट्य मेलका प्रतिनिधि पात्र बनेर उदाए । खासमा, इन्दिराको महात्मा गान्धीसँग न माईतीपट्टिको साइनो छ न त ससुरालीतिरकै ।
सन् १९६६ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री लालबाबु शास्त्रीको तासकन्दमा अचानक मृत्यु हुँदा इन्दिरा सूचना तथा प्रशारण मन्त्री थिईन् । पार्टीभित्र कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि चुनाव भयो । दलको नेताका उम्मेद्वार थिए, कांग्रेसभित्र दक्षिणपन्थी भनेर चिनिने मोरारजी देसाई तथा इन्दिरा गान्धी । कांग्रेस नेता के. कामराजले इन्दिराका लागि बहुमत जुटाउन निकै मेहनत गरेका थिए । यसरी संसदीय दलको नेतामा मोरारजी देसाईलाई हराउँदै उनी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएकी थिईन् । इन्दिराले पहिलोपटक आम चुनावमा पार्टीको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसलाई ठूलो झट्का लागेको थियो–आठ राज्यमा कांग्रेस चुनाव हारेको थियो । संसदमा पनि कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर भयो । यसकारण, समाजवादी नेता डा.राम मनोहर लोहिया बारम्बार संसदमा उनलाई ‘गुंगी गुडिया’ (बोल्न नसक्ने बच्ची) भन्दै कटाक्ष गर्ने गर्थे ।
अटल विहारीले इन्दिरालाई भने, ‘दुर्गा’
जवाहरलाल नेहरुकी छोरी भएकै कारण सन् १९५९ मा इन्दिरा कांग्रेसको राष्ट्रिय अध्यक्ष चुनिएकी थिईन् । पार्टीभित्रको दक्षिणपन्थी खेमामा, यसैकारण उनी विरुद्ध केही विरोधीहरु उत्पन्न भएका थिए । विरोधीलाई शान्त पार्नका लागि इन्दिराले, ढाई साल अगाडि चुनाव जितेर आएको केरलाको कम्युनिष्ट सरकार ढालेर राष्ट्रपति शासन लागू गरिन् । यसै वर्ष उनी अध्यक्ष चुनिएकी थिईन् । उनले प्रसिद्ध कम्युनिष्ट नेता तथा पहिलो मुख्यमन्त्री ईएमएस नम्बुदरीपादले नेतृत्व गरेको सरकारलाई बर्खास्त गरेकी थिईन् । राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुलाई कानुन व्यवस्थाको उल्लंघन भनिएको थियो तर यसले उनीमाथि कुनै असर गरेन । तर, पनि इन्दिरा गान्धीको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीसँग राजनीतिक सम्बन्ध सुमधुर थियो । सन् १९६९ मा उनले बैँक तथा राजामहाराजाको शाही सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर कम्युनिष्टको मन जितेकी थिईन् । भारती कम्युनिष्ट पार्टीका नेता श्रीपाद डांगेले यसलाई एकता र संघर्षको नीतिका रुपमा अथ्र्याएका थिए । अर्थात्, कांग्रेसका जनपक्षीय नीतिहरुमा एकजुट हुने अनि जनविरोधी नीति विरुद्ध संघर्ष गर्ने । इन्दिराको यस्तो रणनीतिलाई लन्डनबाट प्रकाशित हुने टाईम्स पत्रिकाकी पत्रकार पिटर हेजलहस्र्टले ‘स्वार्थ तर्फको झुकाव’ भनेर टिप्पणी गरेकी थिईन् ।
सन् १९७१ मा इन्दिरा बंगलादेशको समर्थनमा उभिईन् र स्वतन्त्र बंगलादेशका लागि पाकिस्तानसँग युद्द गर्ने घोषणा गरिन् । त्यस युद्धमा इन्दिरालाई सोभियत संघले धेरै मदत ग¥यो । फलस्वरुप, पाकिस्तान युद्धबाट पछाडि हट्यो र बंगलादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको हैशियत दिन तयार भयो । यसरी, विश्व मानचित्रमा पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेश नामको नयाँ मुलुकका रुपमा देखाप¥यो । यो, त्यो समय हो, जतिखेर भारत र अफगानिस्तानसँग सोभियत संघको गहिरो मित्रता थियो भने पाकिस्तानसँग अमेरिकाको । पूर्वी पाकिस्तान मामिला पाकिस्तानको आन्तरिक मामिला भएको र यसमा इन्दिराले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको अमेरिकी बुझाई थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले विशेष दुत पठाएर इन्दिरालाई पाकिस्तान मामिलाबाट अलग रहन आग्रह गरेका थिए । पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई अलग गरेकै कारण भारतमा मात्र होइन विश्वभर उनको चर्चा चुलिएको थियो । कतिसम्म भने, अटल विहारी वाजपेयीले उनलाई ‘दुर्गा’को संज्ञा दिएका थिए ।
सन् १९७५ को चुनावमा इन्दिराले धाँधली गरेको, जित्नका लागि अत्यधिक पैसा खर्च गरेको तथा चुनाव प्रसार प्रचारमा सरकारी स्रोतसाधनको दुरूपयोग गरेको आरोप लाग्यो । त्यसैगरी, सन् १९७६ मा हङकङको एउटा तेल कम्पनीसँग खरिदबिक्री सम्झौतामा इन्दिरा गान्धीले १३ करोड भ्रष्टाचार गरेको अर्काे आरोप लाग्यो । यसपछि, कांग्रेस भित्र तथा बाहिरका समाजवादी, रुढीवादी, जनसंघ (आजको भाजपा) आदि मिलेर इन्दिरा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । यस आन्दोलनको नेतृत्व समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायणले गरेका थिए । यो आन्दोलन जेपी आन्दोलन तथा विहार आन्दोलनका नामले चर्चित छ ।
विश्व सामु भारतको शक्ति प्रदर्शन गरेकी इन्दिरा यस आन्दोलनले गर्दा तनावमा आईन् । अनि, सन् १९७५ को चुनावी विषयमा ईलाहावाद अदालतले उनको संसद सदस्यता खारेज गरिदिएपछि उनलाई झन तनाव वढ्यो । २५ जुन १९७५ मा आपतकाल घोषणा गरियो । खासमा यो आपतकाल इन्दिराका कान्छा छोराले लगाएका थिए । साथै, उनले इन्दिराका मुख्य सचिव पीएन हक्सर र मिडिया प्रवक्ता शारदा प्रसादलाई पनि पदबाट हटाएका थिए ।
बंगलादेश युद्दमा पाकिस्तान पराजित भएपछि इन्दिराले आईरन लेडीको उपमा पाएकी थिईन् । तर, जस्तो भनिने गरिएको छ, कांग्रेस धर्मनिरपेक्षतामा विश्वास गर्ने दल हो, वास्तविकतामा चाहिँ यस्तो देखिँदैन । इन्दिराको छवि पनि धर्मनिरपेक्ष देखिँदैन, सन् १९८२ मा जम्मू चुनावका बेला भएको साम्प्रदायिक दंगामा उनले आप्mनो साम्प्रदायिक रंग देखाएकी थिईन् । जम्मूमा कांग्रेसको चुनावी अभियानले साम्प्रदायिक स्वर समात्नुको मुख्य कारण ‘खलिस्तान’ गठनका लागि चलिरहेको आन्दोलन थियो । तर पनि, सन् १९८४ मा जब इन्दिराको हत्या भयो, त्यसपछि पनि कांग्रेसले आप्mनो रंग फेर्न सकेन । राजीव गान्धीले सहानुभूति भोट पाएर ५१४ मध्ये ४०४ सिटमा अभूतपूर्व जित हासिल गरे भनिन्छ तर यो सतही कारण हो । खासमा, अल्पंख्यक धर्म सम्प्रदाय विरुद्ध चलाईएको हिन्दु साम्प्रदायिकताले कांग्रेसलाई यस्तो अभूतपूर्व चुनावी सफलता दिलाएको थियो ।
‘ब्लु स्टार’ अपरेसन आफैंलाई घातक
भारत पाकिस्तान विभाजनदेखि नै पञ्जाब, हरियाणा, हिमाञ्चल तथा जम्मू–कश्मिर क्षेत्र समेटेर स्वतन्त्र राष्ट्र ‘खलिस्तान’ बन्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको थियो । धर्म, भाषा र जातिको आधारमा सिखहरु भारत सरकारबाट अपमानित भएको महसुस गर्न थालेका थिए । सन् १९८४ मा सिखहरुको पवित्र धर्मस्थल गाल्डेन टेम्पलमा अड्डा जमाएर बसेका हतियारधारी खलिस्थान समर्थकहरुविरुद्ध इन्दिरा गान्धीले अपरेसन ‘ब्लु स्टार’ सुरू गरिन् । यस अपरेसनमा सरकारी सुरक्षा फौज, लडाकु तथा मन्दिरभित्र रहेका निर्दाेष मानिसहरु गरी हजारौँ मारिए । मन्दिर पनि क्षतिग्रस्त भयो । विपक्षीहरुले यस घटनाको चर्काे विरोध गर्दै, ‘इन्दिराले शक्तिको दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाए भने सिखहरूले यसलाई सरकारले आफू विरुद्ध चलाएको अभियानको रुपमा बुझे । त्यसैकारण, ३१ अक्टोबर, १९८४ को बिहान इन्दिरालाई उनका दुई सिख सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या गरे । त्यसपछि कांग्रेस समर्थकहरुले उब्जाएको साम्प्रदायिक हिंसामा दश हजार बढी सिखहरु मारिए ।
मुस्लिम तुष्टिकरण विरुद्ध हिन्दु
सन् १९८९ मा राजीव गान्धीले रामराज्य स्थापना गर्ने वचन दिँदै अयोध्यामा आप्mनो चुनावी अभियान सुरू गरे । उनी इलाहावाद उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध ठिक त्यहि स्थानमा राम मन्दिरको शिलान्यास गर्न तयार भए जहाँनेर विश्व हिन्दु परिषद्ले माग गरेको थियो । त्यहि ट्रेण्ड आज पनि जस्तोको त्यस्तै चलिरहेको छ । कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले गुजरात चुनावी अभियानको सुरुवात मन्दिर गएर गरे । मुख्य गरी, एउटा हिन्दु देशभित्र नेताहरुले मन्दिर जानु सामान्य हिसाबले अस्वभाविक कुरो होईन । तर चुनावको समय आउने बितिक्कै मन्दिर जानुले यहि प्रमाणित गर्छ कि, भाजपा कांग्रेसलाई मुस्लिम तुष्टिकरण पार्टीको आरोप नलगाओस् ।
६० वर्षे कांग्रेसराजमा मुस्लिमहरुको तुष्टिकरण कसरी गरिएको छ, यो त सन् २००५ को सच्चर कमिटी रिपोर्टबाट नै स्पष्ट भईसकेको थियो । तब, यस तुष्टिकरणको आरोपसँग कांग्रेस यति डराउनु पर्ने कारण के ? खासमा, कांग्रेस र भाजपाबीच खासै अन्तर छैन, इन्दिरा गान्धी पनि धार्मिकताको यस रंगबाट बच्न सकेकी थिईनन् । अनुवादःअभिशेक जोशी
प्रकाशित १९ जेष्ठ २0७५ , शनिबार | 2018-06-02 02:58:31